Monday March 02, 2020 - 21:19:33 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Wararka ka imaanaya wadanka Yemen ayaa sheegaya in dagaallo culus kadib ay wakiillada Iiraan ay qabsadeen magaalo weyn oo kaabiga ku haysa xuduud beenaadka sacuudiga, shalay ayay xuuthiyiintu si buuxa ula wareegeen magaalada lagu magacaabo Alxazam oo ah caasimadda gobolka Aljowf.
Magaaladan waxay dhacdaa waqooyi galbeed wadank yemen waxay kamid tahay magaalooyinka ugu waaweyn wadanka, dhanka galbeed waxaa uga beegan gobolka Ma'rib dhanka koonfureedna gobolka Sacdah oo ah macqalka Xuuthiyiinta.
Dhammaadkii sideetameeyadii ee qarnigii lasoo dhaafay ayaa magaalada Alxazam loo dhisay waddo laami ah oo ku xirta ma'rib illaa iyo gobollada koonfureed waxayna sidaas ku noqotay magaalo halbowle u ah Yemen.
Waxay kaabiga ku haysaa dhulka Xarameynka ee dowladda Sacuudiga ay kataliso, kumanaan kamid ah maleeshiyaadka xuuthiyiinta oo wata gaadiidka tiknikada loo yaqaan gaar ahaan Cabdi bilayasha ayaa magaalada ku gaaf wareegaya.
Qabsashada Alxazam waxay timid kadib 2 isbuuc oo hareeraheeda ay dagaallo culus ku dhaxmarayeen xuuthiyiinta oo dhinac ah iyo ciidamada xukuumadda cabdi rabihi iyo kuwa sacuudiga oo isku dhinac ah.
wariyal ayaa soo sheegay in intii dagaalladu socdeen ay diyaaradaha sacuudiga geysteen boqolaal duqeymo xagg cirka ah balse taasi ka muujin horumarradii ay dhulka ka sameynayeen wakiillada Iiraan ee dalka Yemen.
Afhayeen u hadlay maleeshiyadka xuuthiga ayaa sheegay in qabsashadooda magaalada Alxazam ay timid kadib markii ay isbahaysiyo lasameysteen dadka deegaanka oo uu sheegay in ay dhibsadeen wax uu ugu yeeray calooshood ushaqeystayasha Sacuudiga.